Toko 26 — Adin’ny Finoana | EGW Writings
Toko 24 — Mandroso sy MiakatraToko 25 — Manatanteraka ToetraToko 27 — Fandresena NoraisinaToko 28 — Ahoana no Hampahatanjaka?Toko 29 — Ny Fiainana MandresyToko 30 — Finoana VelonaToko 31 — Firaisana amin’i Kristy
Maro amin’ny tanora no tsy mbola nanao ho foto-kevitra ny hanompo an’Andriamanitra. Koa dia rendriky ny rahona mandalo rehetra izy ary tsy manana hery haharetana. Tsy mitombo amin’ny fahasoavana izy. Miseho mitandrina ny didin’Andriamanitra izy, nefa tsy manaiky ny asan’ny lalàn’Andriamanitra akory, ary tsy afaka ny ho izany akory. Mila fanovana ny fony. Mila mahita fahatsaran-tarehy ao amin’ny fahamasinana izy; dia haniry azy fatratra tahaka ny diera miahanahana maniry ny rano an’ony izy, ary ho tia an’Andriamanitra sy ny lalany izy; dia ho mora ny ziogan’i Kristy, ary ho maivana ny entany.HAT 80.1
Raha izay ibaikoan’Andriamanitra no halehanao, ry tanora malala, dia aza manantena fa ho fiadanana sy fahombiazana mandrakariva no hitanao eny an-dalana. Tsy izay mora indrindra no lalana mankany any amin’ny mandrakizay, indraindray aza maizina sy feno tsilo. Fa manàna toky lanao fa ny tanan’Andriamanitra mandrakizay dia manodidina anao, miaro anao amin’ny ratsy. Maniry anao Izy hampiasa finoana mafana Azy, ka hianatra ny hatoky Azy amin’ny maloka toy ny amin’ny andro mibaliaka.HAT 80.2